Waraysi Bare Sare Siciid Sh. Samatar
RaadRaac: Xusuus – waraysiga waxa uu Bare sare Siciid Sh. Samatar kaga hadlayaa guud ahaan xaalada Soomaaliya, iyo sababaha dhaliya in ay Soomaaliya ilaa hadda u degi la’dahay.Waraysiga waxaa qaaday Khaill C/raxmaan. Waraysigan ayaa horey uga baxay RaadRaac bishii August 7, 2012.
Hoos ka dhegayso waraysiga oo dhan:
One Response to “RaadRaac: Xusuus- Waraysi Bare Sare Siciid Sh. Samatar (AHU)”
Wax badan oo run ah buu sheegey laakiinse mid baa ka maqan oo dembiga Afweyne keliya uun buu saaray laakiinse wuxuu ka iloowbay Afweeyne reerkiisa siiba Marehan, Ogaden, iyo Dhulbahante ayaa ilaa last daygiii taageerayey ee nin keliya ma ahayn. Soomaali na dib isu ma aamiini karta ta awgeed